ကြည့်ရှု့သူ (၃)သန်းနီးပါးရှိတဲ့ ဖြူဖြူထွေးရဲ့ သက်ငယ်မုဒိန်းပညာပေး ဗီဒီယို - MyanmarFamilyLife
ကျောင်းကပွဲတစ်ခုရဲ့ ဖျော်ဖြေပွဲ ရုပ်သံတစ်ခုကြောင့် နာမည်ကြီးသွားခဲ့ပြီး အနုပညာလောကထဲကို ရောက်လာတဲ့ ဖြူဖြူထွေးဟာ ချစ်ဖို့ကောင်းသလို မိဘကျေးဇူးသိတတ်သူတစ်ယောက်ပါ…..
အနုပညာလောကမှာ ကြော်ငြာတွေနဲ့ ဇာတ်လမ်းတွေ လက်ခံရိုက်ကူးလျက်ရှိပြီး ပရိသတ်တစ်ခဲနက်အားပေးထောက်ခံမှု ရထားသူလည်းဖြစ်ပါတယ်….
ဖြူဖြူထွေးဟာ သူမရဲ့ ဖေ့စ်ဘုတ်စာမျက်နှာမှာ သက်ငယ်မုဒိန်းနှင့် ဆက်နွယ်မှုရှိတဲ့ ဇာတ်လမ်းရုပ်သံတို တစ်ခုကို တင်ထားခဲ့တာဖြစ်ပြီး “သက်ကြီး သက်ငယ်မရွေး အပြစ်ရှိရင်အပြစ်ပေးသင့်ပါတယ် 😳😳😳 ” လို့လည်း ခေါင်းစဉ်တပ်ထားပါတယ်….
ရိုက်ကူးချိန် ၄ မိနစ်ကျော် ဖြစ်ပေမယ့် ပညာသားပါတဲ့ သူမရဲ့ ရုပ်သံဇာတ်လမ်းတိုလေးကို ကြည့်ရှု့အားပေးသူ ၃ သန်းနီးပါးရှိသွားပြီး အားပေးထောက်ခံထားတဲ့ မှတ်ချက်တွေလည်း မျာစွာရရှိထားပါတယ်…..
ချစ်ဖို့ကောင်းပြီး ဟန်ဆောင်မှုကင်းတဲ့ ဖြူဖြူထွေး အနုပညာလောကမှာ အောင်မြင်တဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါစေလို့ နေ့စဉ်သတင်းနှင့်သုတရသအဖြာဖြာ ပေ့စ်မှ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်နော်….
Credit : နေ့စဉ်သတင်းနှင့်သုတရသအဖြာဖြာ
ကြောငျးကပှဲတဈခုရဲ့ ဖြျောဖွပှေဲ ရုပျသံတဈခုကွောငျ့ နာမညျကွီးသှားခဲ့ပွီး အနုပညာလောကထဲကို ရောကျလာတဲ့ ဖွူဖွူထှေးဟာ ခဈြဖို့ကောငျးသလို မိဘကြေးဇူးသိတတျသူတဈယောကျပါ…..အနုပညာလောကမှာ ကွျောငွာတှနေဲ့ ဇာတျလမျးတှေ လကျခံရိုကျကူးလကျြရှိပွီး ပရိသတျတဈခဲနကျအားပေးထောကျခံမှု ရထားသူလညျးဖွဈပါတယျ….
ဖွူဖွူထှေးဟာ သူမရဲ့ ဖစျေ့ဘုတျစာမကျြနှာမှာ သကျငယျမုဒိနျးနှငျ့ ဆကျနှယျမှုရှိတဲ့ ဇာတျလမျးရုပျသံတို တဈခုကို တငျထားခဲ့တာဖွဈပွီး “သကျကွီး သကျငယျမရှေး အပွဈရှိရငျအပွဈပေးသငျ့ပါတယျ 😳😳😳 ” လို့လညျး ခေါငျးစဉျတပျထားပါတယျ….
ရိုကျကူးခြိနျ ၄ မိနဈကြျော ဖွဈပမေယျ့ ပညာသားပါတဲ့ သူမရဲ့ ရုပျသံဇာတျလမျးတိုလေးကို ကွညျ့ရှု့အားပေးသူ ၃ သနျးနီးပါးရှိသှားပွီး အားပေးထောကျခံထားတဲ့ မှတျခကျြတှလေညျး မြာစှာရရှိထားပါတယျ…..ခဈြဖို့ကောငျးပွီး ဟနျဆောငျမှုကငျးတဲ့ ဖွူဖွူထှေး အနုပညာလောကမှာ အောငျမွငျတဲ့သူတဈယောကျဖွဈပါစလေို့ နစေ့ဉျသတငျးနှငျ့သုတရသအဖွာဖွာ ပစျေ့မှ ဆုတောငျးပေးလိုကျပါတယျနျော…. နစေ့ဉျသတငျးနှငျ့သုတရသအဖွာဖွာ